Media Dhignaashada Solutions Xalinta Arimaha Dhignaashada for All qaabab, Qalabka & More
Samsung Galaxy S5 & Hoos
Taariikhda Release lastest:
Samsung Galaxy S5: February 24, 2014
Samsung Galaxy S4, April 22, 2013
Xaqiiqada Fun ku saabsan Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy S5 uu leeyahay hab Kids a la kulan oo animations, oo sidaas daraaddeed ma ay wici doonaa tababaraha qalad ah ama aad lacag ku qaataan dhaqax.
Waxaa lagu Samsung Galaxy S5 dib daayay inay February, 2014. Imisa idinka mid ah oo u riyaaqay? The 5.1-inji Samsung Galaxy S5 runtii waa waa-leeyihiin qalab loogu daawashada filimaanta, bandhigyada TV, Isladooda taxane on go ah. Samsung Galaxy S4 & hoos ku qoran ma noqon karaan si ku haboon, laakiin weli waad heli kartaa waayo-aragnimo movie siman.
Marka laga reebo khibrad wanaagsan, qaar idinka mid ah ayaa weli ka caban kartaa in qaar ka mid ah filimada aad laguma ciyaari karo on Samsung Galaxy S5 & hoos ku qoran. Waa maxay sababtu? Bulshada, waxaa jira laba sababta ugu weyn ee in. Dhinaca mid, filimada ay ku yeelan karaan qaab aan la taageeray by telefoonada Samsung Galaxy. Hubi in qaab filim aad jaanqaadi Samsung telefoonada halkan . Dhinaca kale, inkastoo filimada leeyihiin qaab la jaan qaada qalab aad, laakiin codec ee ma aha xaq. Sida caadiga ah, ee codecs taageeray waa H.263, H.264, VC-1 iyo VP8.
Sida aad xal u heli karo this video dhibaato aan ciyaaro? Ha welwelin. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay Converter video ah in aad gacan ka geysato labada mid ah sababaha kor ku xusan. Laakiin haddii aadan weli aad u xalin karaa, isku kay halleeyeen ay jirto in dhibaato aad la il video, oo waxaa laga yaabaa in musuqmaasuq. Tag hubiyo videos.
Kor ku xusan waa xal guud ee dhibaatooyinka waafaqsan warbaahinta aad ku Samsung Galaxy S5 & hoos ku qoran. Hubi soo socda faahfaahin dheeraad ah hage.
Talooyin Samsung Galaxy S5
Halkan waxa ku jira Talooyin iyo tabaha ay u hagaan aad u ciyaaro qaabab kasta oo ku saabsan telefoonka Samsung Galaxy, oo ay ku jiraan aad files deegaanka ah ee aad taleefan iyo sidoo kale online videos.
Video qaabab ay taageerayaan u Samsung Galaxy S4, S3 iyo S2
Sida loo Beddelaan Lugood M4V in Samsung Galaxy S5 / S4 / S3
Sida loo Play WMA on Samsung Galaxy Taxanaha
Xaqiiqooyinka la jaan qaada Samsung Galaxy S5 iyo S4
Waxaa laga yaabaa in farqi yar oo ka mid ah qaababka ay taageerayaan ka mid ah lagu daydo differnt ee telefoonka Samsung Galaxy. Halkan waxaa ku qoran liiska buuxa ee Samsung Galaxy S5 iyo S4.
Taageerayaan Media qaabab
Search Solutions in All Dhibaatooyinka Your Dhignaashada
Arrimaha Hot Qaabka
Arrimaha Hot Device
DVD Video UJEEDDO File
Fiidiyo la diiwaangeliyey Video File
Lugood Video File
3GPP Warbaahinta File
Arag in dheeraad ah >> See yar >>
iPhone 6, 6 lagu daray, 5s oo dheeraad ah
iPad 4, Air, Mini oo dheeraad ah
Madaxweyne Siilaanyo Oo
Madaxweyne Siilaanyo Oo 360, Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
Samsung Galaxy S5, S4 & hoos ku qoran
iPod xiriiri 5 / nano / classic & more
Samsung Galaxy Fiiro 4/3 & more
Toddoba ka mid ah MP4 ugu wanaagsan ee DVD converters
Sida loo Guba iMovie Mashaariicda in DVD on iDVD
Sidee lagu shido MP4 Si DVD Isticmaalka Wondershare DVD Creator
Ma qaar ka mid ah MPEG-4, files MP4 aan la akhriyi kartaa in aad TV? Isku day inaad taas xal degdeg ah oo u fudud in ay dhibaato biqil dhibaatadan.
Ma aan helin xal aad weli? Ha welwelin. Waxaad si toos ah ii weydiin kartaa. Anigu waxaan ahay mar walba halkan si ay kuu caawiyaan.
Khabiirka in la macaamilo dhammaan arrimaha ku saabsan warbaahinta, qalabka iyo kuwo kale. Cunid qalabka elektarooniga ah, technology iyo dhaqanka pop.
Doonayaa noqon editor marti for this topic ah
iyo aqoonta nala wadaagaan?
Nala soo xiriir Hadda >>